FONJAN’I MANAKARA : Tafakatra avo efatra heny ny tokony ho sahaza ny isan’ireo gadra
Tato ato dia re matetika ny karazana tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fanajana ny zon’olombelona eny anivon’ireny fonja ireny. 24 janvier 2018
Tamin’ny taon-dasa manokana izao dia ny fonjan’i Mananjary no niteraka resabe ary nanaovana fanadihadiana manokana mahakasika izay lafiny zon’olombelona izay. Ankehitriny dia ny toerana andraisana ireo voafonja ao Manakara indray no ahitana tranga tsy mifanaraka amin’ny tokony ho izy.
Fantatra mantsy izao fa tafakatra avo efatra heny amin’ny olona tokony sahaza ny fonjan’i Manakara ny isan’ny olona voafonja ao an-toerana amin’izao fotoana izao. Raha tokony ho 150 monja no sahaza ny fonjan’i Manakara dia mahatratra 628 izy ireo hatramin’ny zoma lasa teo. Araka ny fanazavana dia vehivavy ny 28 amin’izy ireo, raha 25 kosa ny « mineur » na ny zaza tsy ampy taona. Mbola tsy voatsara kosa ny 99%-n’ireo voafonja ankehitriny.
Fanirian’izy ireo, araka izany, ny mba hanafainganana ny fotoam-pitsarana azy ireo araka ny tokony ho izy. Manoloana izany dia mahatsapa ireo voafonja fa tsy maharaka ny hamaroan’izy ireo ny fotodrafitrasa. Tafiditra ao anatin’izany ny fatoriana, ny toeram-pidiovana sy ny fanadiovana ao anatin’ny fonja. Amin’izao taom-baovao izao dia tsy nohadinoin’ny solombavambahoakan’i Manakara ny nankahery sy nirary soa ary niarahaba ireo voafonja eo anivon’ity fonja ity.
Nivimbina vary telo gony ity tompon’andraikitra ity nandritra izao fitsidihany ny fonja izao mba hanampiana ny sakafon’ireo gadra. Ny zoma lasa teo no nanatanterahany izany. Mofomamy iray isan’olona kosa no natolotr’ireo mpino kristiana avy amin’ny fiangonana loterana ao Manakara ny zoma lasa teo ihany. Andrasana araka izany izay mety ho fandraisana andraikitry ny fanjakana sy ireo mpisehatra tokony hihetsika rehetra manoloana izao zava-misy ao Manakara izao.